Nhau, 08 Zvita 2017
Chishanu 8 Zvita 2017
Vechidiki muMDC-T Vanoti Vari Kunyoresa Zvine Mutsindo
Vechidiki mubato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai vanoti vari kuratidza chido chekunyoresa kuvhota gore rinouya. Vanotiwo vatonyorera kuZimbabwe Electoral Commission, ZEC, kuti nguva yekunyoresa iwedzerwe.
Amai Makarau Vanosiya Basa saSachigaro weZEC
Sachigaro wekomisheni inowona nezvesarudzo ye Zimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vasiya basa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara chose nebhajeti rakaturwa muparamende nezuro negurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, iro rakaisa chikamu chemari yakawanda ichashandiswa nehurumende kumihoro yevashandi.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Zvita 8, 2017
Vakawanda Vanoti Mari Iri Kuda Kupihwa Bazi reHutano Ishoma
Bazi iri riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere emadhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebhajeti.
MDC Alliance Yoramba Kutambira Bhajeti ra 2018
Mukuru webato rePeople Democratic Party, VaTendai Biti, vanove zvakare sachigaro wekomiiti inoona nezvehwaro hwehupfumi hwenyika, vati havawoni hurumende yeZanu PF ichitevedza zvayakatura mubhajeti iro rakaturwa nezuro
MDC Alliance Inoshora Bhajeti raVaChinamasa.
Mapato anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aramba kutambira bhajeti rehurumende ra2018 achiti harina zvarinogadzirisa uye Zanu PF iri kubata vanhu kumeso.
Vakawanda Vofarira Hurongwa hweKudzikisa Huwandu hweMizinda yeZimbabwe
Vachitura muparamende hurongwa hwekushandiswa kwemari hwegore rinouya, gurukota rezvemari, Va Patrick Chinamasa, vakazivisa neChina kuti hurumende iri kuda kuderedza huwandu hwemizinda yayo iri kunze kwenyika nechinangwa chekuda kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kunze kwenyika.
Veruzhinji Voyambirwa Kusanwa Mvura yeMumigodhi kuBudiriro neGlen Norah
Kanzuru yeHarare iri kuyambira vagari vemumisha inogara veruzhinji yeBudiriro neGlen Norah kuti vasashandise mvura yemumighodhi kana matsime avari kuchera sezvo mvura iyi iine hutachiona.